Midowga Yurub oo sheegay in ku tababarayaan Ciidanka DFS gudaha dalka(Masawiro)
May 15, 2013 - Written by Editor
Muqdisho:-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta waxaa uu Soomaaliya ku soo dhaweyay Tababarka Militariga Yurub (EUTM) oo hadda u soo guuray Soomaaliya si ay qeyb uga noqdaan tababarayaasha Ciidamadda Xooga Dalka.
“ Sedexdii sano ee lasoo dhaafay waxeey Midowga Yurub Soomaliya ugu soo tabareen dalka Yugandha 3000 oo ciidan ah. Midowga Yurub waxeey Gudaha Soomaaliya ku tababarayaan Ciidanka Xooga Dalka Maanta waxaa Muqdisho ka furmay tababarkii oo hadda kadib si toos ah loogu bixin doona gudaha dalka Soomaaliya. Sanadkaan dhamaadkiisa ayaa waxaa dhamaan doono guuritaanka ay halkan u soo guurayaan dhamaan tababarada Midowga Yurub”
Madaxweynaha ayaa wuxuu yiri “ Xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Midowga Yurub waa mid wanagsan. Waxeey nagala qeyb qadanaayan dib u dhiska ciidan qaran oo matala dhamaan bulshadda qeybaheeda kala duwan. Ciidan tababar fiican leh oo asluub iyo aqlaaq leh oo sidoo kalena dhowro xuquuqda shacabka Soomaaliyeed.”
Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka hadda ay haysato qalab la’aan laakin goor dhaw laga bixi doono.
Ugu danbeyntii ayuu Madaxweynaha wuxuu yiri” Si kalsooni leh ayaan ugu mahad celinayaa dadaalka ay wadaan Midowga Yurub oo ku aadan tabarka ay siinayaan ciidanka Xooga dalka. Waxaana diyaar u ah in ay la shaqeeyaan Wasiirka Gashaandhiga iyo taliyayaasha Ciidanka Xoogga Dalka”